Little Nightmare – Game News for Myanmar
Horror, PC, PS4, Puzzle, Third person
ကလေးမလေးတစ်ယောက် သူမရဲ့ အိပ်မက်ဆိုးကနေ ထွက်ပြေးလို့ လွတ်မြောက်နိုင်ပါ့မလား?
မင်မြင်သမျှ စားဖို့ပဲ သိပြီး ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အကောင်ကြီးတွေ ပြည့်နှက်နေသော နေရာ ။ အဲဒီနေရာမှာ ကလေးမလေး တစ်ယောက် ပိတ်မိနေတယ် ။ သူမ နာမည်က Six ။ ဒီနေရာမှာ အိမ်ကြီးတစ်လုံးလိုမျိုး ဖြစ်ပြီး ကုတင်၊ ထိုင်ခုံ စတဲ့ လူအသုံးအဆောင် ပစ္စည်းတွေ ရှိနေတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒီအရာတွေ အကုန်လုံးဟာ သူမအနေနှင့် ကြည့်လိုက်လျှင် အလွန့်အလွန် ကြီးမားနေပါတယ် ။ သူမမှာ ပိုင်ဆိုင်တာဆိုလို့ မီးခြစ်လေး တစ်လုံးပဲ ရှိပါတယ် ။ အားလုံးနီးပါး မှောင်မဲနေတဲ့ ဒီနေရာကနေ ကလေးမလေး Six ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်အောင် သင်ကူညီပေးရမှာပါ ။ အမှောင်ထဲမှာ ဖြေရှင်းရခက်တဲ့ ပဟေဠိ တွေ ၊ သင့်ကို အန္တရာယ် ပေးမယ့် အကောင်တွေ ၊ ထောင်ချောက်တွေ ၊ သင် သတိတချက်လွတ်တာနဲ့ သင့်ကို ဝါးမျိုဖို့ စောင့်နေတဲ့ အရာတွေ အများကြီး ရှိနေပါတယ် ။ ရှာဖွေဖော်ထုတ်စရာ လျှို့ဝှက်ချက်တွေ အများကြီး ရှိပြီး ထောင်ချောက်တွေလည်း ရှိနေတာမို့လို့ နေရာတိုင်း သတိထား စူးစမ်းလေ့လာရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ သင့်အနေနဲ့ တိုက်ခိုက်နိုင်မှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ပုန်းချိန်တန် ပုန်း ပြေးချိန်တန် ပြေးရမှာပါ ။
ကလေးမလေး Six က သူမရဲ့ အိပ်မက်ဆိုးကနေ ထွက်ပြေးလို့ လွတ်မြောက်နိုင်ပါ့မလား?
Little Nightmare ဂိမ်းဟာ Graphic မှာ unreal engine4သုံးထားတဲ့ Single player အမျိုးအစား puzzle platformer ဂိမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် ။
Little Nightmares ဂိမ်းဟာ ဧပရယ်လ ၂၈ ရက်နေ့မှာ PlayStation4၊ Xbox One နှင့် PC အတွက် physical အနေနှင့်ရော digital အနေနှင့်ပါ ကမ္ဘာအနှံ့ ဖြန့်ချီတော့မှာ ဖြစ်ကြောင်း Bandai Namco က ကြေညာလိုက်ပါတယ် ။
Limited “Six Edition” လည်း ထွက်ရှိလာမှာ ဖြစ်ပြီး အထဲမှာ 10-centimeter Six figurine, themed cage box, sticker board နှင့် exclusive poster တွေ ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
Pre-orders လက်ခံနေပြီ ဖြစ်ပြီး အထဲမှာ ဂိမ်းထဲမှာသာ ရရှိနိုင်မယ့် “Upside-down Teapot” နှင့် “Scarecrow Sack” ပါဝင်ပါတယ် ။ PlayStation4နှင့် PC pre-orders တွေမှာတော့ original soundtrack (in digital format), an exclusive PlayStation4theme နှင့် PC wallpaper (featuring The Janitor) တို့ ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
Steam Link => http://store.steampowered.com/app/424840/
ကလေးမလေး က သူမရဲ့ အိပျမကျဆိုးကနေ ထှကျပွေးလို့ လှတျမွောကျနိုငျပါ့မလား?
မွငျမွငျသမြှ စားဖို့ပဲ သိပွီး ကွောကျစရာကောငျးတဲ့ အကောငျကွီးတှေ ပွညျ့နှကျနသေော နရော ။ အဲဒီနရောမှာ ကလေးမလေး တဈယောကျ ပိတျမိနတေယျ ။ သူမ နာမညျက Six ။ ဒီနရောမှာ အိမျကွီးတဈလုံးလိုမြိုး ဖွဈပွီး ကုတငျ၊ ထိုငျခုံ စတဲ့ လူအသုံးအဆောငျ ပစ်စညျးတှေ ရှိနတေယျ ။ ဒါပမေယျ့ ဒီအရာတှေ အကုနျလုံးဟာ သူမအနနှေငျ့ ကွညျ့လိုကျလြှငျ အလှနျ့အလှနျ ကွီးမားနပေါတယျ ။ သူမမှာ ပိုငျဆိုငျတာဆိုလို့ မီးခွဈလေး တဈလုံးပဲ ရှိပါတယျ ။ အားလုံးနီးပါး မှောငျမဲနတေဲ့ ဒီနရောကနေ ကလေးမလေး Six ထှကျပွေး လှတျမွောကျအောငျ သငျကူညီပေးရမှာပါ ။ အမှောငျထဲမှာ ဖွရှေငျးရခကျတဲ့ ပဟဠေိ တှေ ၊ သငျ့ကို အန်တရာယျ ပေးမယျ့ အကောငျတှေ ၊ ထောငျခြောကျတှေ ၊ သငျ သတိတခကျြလှတျတာနဲ့ သငျ့ကို ဝါးမြိုဖို့ စောငျ့နတေဲ့ အရာတှေ အမြားကွီး ရှိနပေါတယျ ။ ရှာဖှဖေျောထုတျစရာ လြှို့ဝှကျခကျြတှေ အမြားကွီး ရှိပွီး ထောငျခြောကျတှလေညျး ရှိနတောမို့လို့ နရောတိုငျး သတိထား စူးစမျးလလေ့ာရမှာ ဖွဈပါတယျ ။ သငျ့အနနေဲ့ တိုကျခိုကျနိုငျမှာ မဟုတျတဲ့အတှကျ ပုနျးခြိနျတနျ ပုနျး ပွေးခြိနျတနျ ပွေးရမှာပါ ။
ကလေးမလေး Six က သူမရဲ့ အိပျမကျဆိုးကနေ ထှကျပွေးလို့ လှတျမွောကျနိုငျပါ့မလား?
Little Nightmare ဂိမျးဟာ Graphic မှာ unreal engine4သုံးထားတဲ့ Single player အမြိုးအစား puzzle platformer ဂိမျးတဈခု ဖွဈပါတယျ ။
Little Nightmares ဂိမျးဟာ ဧပရယျလ ၂၈ ရကျနမှေ့ာ PlayStation4၊ Xbox One နှငျ့ PC အတှကျ physical အနနှေငျ့ရော digital အနနှေငျ့ပါ ကမ်ဘာအနှံ့ ဖွနျ့ခြီတော့မှာ ဖွဈကွောငျး Bandai Namco က ကွညောလိုကျပါတယျ ။
Limited “Six Edition” လညျး ထှကျရှိလာမှာ ဖွဈပွီး အထဲမှာ 10-centimeter Six figurine, themed cage box, sticker board နှငျ့ exclusive poster တှေ ပါဝငျမှာ ဖွဈပါတယျ ။
Pre-orders လကျခံနပွေီ ဖွဈပွီး အထဲမှာ ဂိမျးထဲမှာသာ ရရှိနိုငျမယျ့ “Upside-down Teapot” နှငျ့ “Scarecrow Sack” ပါဝငျပါတယျ ။ PlayStation4နှငျ့ PC pre-orders တှမှောတော့ original soundtrack (in digital format), an exclusive PlayStation4theme နှငျ့ PC wallpaper (featuring The Janitor) တို့ ပါဝငျမှာ ဖွဈပါတယျ ။
Previous Previous post: Final Fantasy VII: Advent Children ထဲက Cloud ပုံစံအတိုင်း တွေ့ရမယ်လို့ Producer Kitase က ဆို
Next Next post: ​အသက်ဝင် လှုပ်ရှားလာမယ့် အရုပ်တွေနဲ့ အတူ ကစားရမယ့် ဖုန်းဂိမ်း LightSeekers